कोदो porridge: खाना पकाउन कसरी सर्वश्रेष्ठ?
केही मानिसहरू चाहनुहुन्छ Pshenko जस्तै capricious अनाज देखि तयार पारे। किन बदमास छ? पहिलो, त्यो अक्सर अनाज, हामी थोक मा किन्न, यो पर्याप्त फोहोर र लामो Lay कहिलेकाहीं तीतो कोदो छ। फलस्वरूप, यो पटक को एक जोडी राम्ररी काम गर्नेछ छैन grits पकाउन र सबै ब्याज नष्ट हुन्छ कोदो porridge भविष्यमा।
तर मेरी हजुरआमा, म सम्झना, हामी अक्सर दूध लागि, कद्दू को वाहेक संग, पकाएको Pshenko तीतो र थियो कहिल्यै। अझै पनि यो सधैं एक तौलिया मा porridge पकाएको र तकिया मुनि doprevat पठाइएको जसमा एक पैन माथि tucked छ सम्झना। र हुनत बच्चाको रूपमा म यो विशेष गरी त्यो देखि, Pshenko जस्तै धेरै उपयोगी, धेरै खुशी संग अब, एक कद्दू को धेरै रुचाउनु छैन थियो।
त्यसैले कसरी कोदो porridge खाना पकाउनु?
सबै को पहिलो कोदो grits हुन धेरै ध्यान दिएर, कम्तिमा5पानी प्रतिस्थापन धोए पर्छ, र त्यसपछि अर्को र parboiled (केही मिनेट लागि पनि सम्भव धमाकेदार, पानी भोकमरी छ) र त्यसपछि मात्र खाना पकाउने सुरु गर्न। सबै समस्या कुनै पनि हुनुपर्छ भनेर छैन अब, उपचार कोदो, तीता मुक्त साथ तयार बनाएको प्याकेजहरू बेचे।
Porridge (मात्र कोदो), जानिन्छ, friable छ, वा तथाकथित viscous porridge-gruel। अन्न को अधिक अनुपात: पानी तरल थपिएको छ, कम आफ्नो crumbly हुनेछ गडबड। Crisp अनाज सामान्यतया मुख्य पकवान रूपमा garnishes र porridge लागि तयार अझ viscous फारममा पकाएको गर्न सकिन्छ। यसलाई हार्ड अनाज, जो गहुँ समावेश र केवल आफ्नो आन्तरिक अङ्गहरू को inflamed क्षेत्रमा रीस उठाउनु हुनेछ, र viscous काशी रूपमा, यदि Koto केही जठरांत्रिय पर्चा, राम्रो तरिकाले बस उसिनेर porridge सबैभन्दा उपयुक्त संस्करण समस्या छ, stipulated छ gruel, conversely, यो तीव्र रोगहरु मा सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैले हामी कोदो धोए, पानी उम्लिरहेको संग उपचार। तर ठूलो विश्वसनीयता राम्रो छ अझै पनि दुई चरणमा कोदो पकाउन। पहिलो, हामी पानी प्रशस्त र एक फोडा गर्न ल्याउन संग पशुको चाक, भर्न हुनेछ केही मिनेट जोश, पानी बिस्तारै मर्ज। अब, फेरि, उम्लिरहेको grits पाकेका पोख्नुहोस् वा तातो दूध, तर यस्तो तरिकाले तरल, 1 भाग अनाज बारे 1.5 भागहरु थियो केही नुन, चलाउनु थप पकाउने नछोऊ को प्रक्रिया मा, हामी एक crumbly गडबड प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, थप्न, एक ढक्कन संग कवर र।
तर, जोश बाक्लो porridge विशेष दूध मा, त्यहाँ बाल्न भनेर एक उच्च सम्भावना हुँदा। स्वादिष्ट porridge उत्तिकै पानी र दूध लिएर प्राप्त छ, गर्मी कम गर्न, मक्खन को एक spoonful थप्दा कम ढक्कन तरल को लगभग पूरा वाष्पीकरण सम्म 15 मिनेट लागि बन्द साथ जौ पकाउन। कि पछि तपाईं बन्द जे भए पनि "अनाज को तरिका मा", आगो र एक हट प्लेट doprevat मा पैन छोड्न वा 10 मिनेटसम्म ओवन मा पुग्न यसलाई पठाउन त तपाईं एकदम crumbly कोदो porridge यद्यपि, साँच्चै छाडा Pshenko पकाउन सत्य बताउन प्राप्त गर्न आवश्यक यो काम गर्दैन।
तयार बनाएको porridge फेरि घिउ टक, podsaharit वा सुकेको खुबानी, किसमिस वा मह थप्न सक्नुहुन्छ। बाक्लो कोदो porridge अक्सर casseroles, दुवै मीठो र दिलकश खाना पकाउने लागि प्रयोग गरिएको छ (तर एक अलग मुद्दा छ)।
तपाईं कद्दू संग कोदो porridge पकाउन तयार हुनुहुन्छ भने, यो उज्ज्वल कद्दू र मिठाई, एकदम lobules लिन सबै भन्दा राम्रो छ। यो छाला देखि सफा, घन मा कटौती र हल्कासित दूध मा जोश, र त्यसपछि दूध तयार कोदो अनाज (जो तीतो पानी एकिकृत) संग कद्दू थप्न, त्यसपछि पकाएको कोदो सम्म simmer। कद्दू संग कोदो porridge त्यहाँ छाडा कुनै हो, किनभने कद्दू रस को वाहेक खाना पकाउने समयमा जारी छ।
कद्दू पट जस्तै प्राप्त - र तपाईंले एउटा सानो सारा कद्दू छ भने, यो सम्भव बन्द बीउ को अंदर एक पुच्छर आफ्नो टाउको को शीर्ष काटन र खाली, सही यो मा कोदो पकाउन छ। आधा कोदो सम्म पहिले नै पकाएको फिर्ता पोख्नुहोस्, तातो दूध, चीनी र एउटै कद्दू किशमिश को कटा टुक्रा एउटा सानो रकम थप्न। एक पुच्छर संग "टोपी" कवर। सबै 40 मिनेट लागि ओवन मा पाक्नु, अन्त मा porridge तेल राख्न भूल छैन। स्वादिष्ट कोदो porridge प्राप्त गर्न र appetizing दिखेगा - म ग्यारेन्टी!
पन्नी मा ग्रिल मा, वर्दी मा, अन्य उत्पादनहरु को कम्पनी मा ...: आलु ओवन मा Bake तरिकाहरू
पनीर क्रीम केक। लागि नुस्खा
मासु गर्न चेरी सस - केचप एक उत्कृष्ट वैकल्पिक
वजन लागि प्याच। समीक्षा र समारोह
Rudeness प्रतिक्रिया कसरी सिक्न
स्याउ को एक पेस्ट - स्वादिष्ट र स्वस्थ व्यवहार
डेनिस कजान: एक प्रसिद्ध खेल टिप्पणीकारले को सफलताको कथा
YaMZ-236: विशेषताहरु, यन्त्र नियन्त्रण
हामी odt ढाँचा भेट? तपाईं कागजात खोल्न?
"इवान Vasilievich आफ्नो पेशे परिवर्तन": भूमिका र अभिनेता। "इवान भिसेलिविचले आफ्नो पेशा परिवर्तन गरे": फिल्मबाट उद्धरण गर्दछ